कुलमानको अर्को कमाल, अन्डरग्राउण्ड तार बिच्छ्याउने काम सकियो ! - Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कुलमानको अर्को कमाल, अन्डरग्राउण्ड तार बिच्छ्याउने काम सकियो !
कुलमानको अर्को कमाल, अन्डरग्राउण्ड तार बिच्छ्याउने काम सकियो !
काठमाडौं। लामो समयदेखि विवादमा रहेको दुहवी–कटहरी विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सकिएको छ । मोरङको गिधनिया वस्तीमा भएको अवरोधका कारण १३ किलोमिटर लामो ३३ केभी क्षमताको प्रसारणलाइनको काम रोकिएको थियो । तर अवरोध भैरहेको गिधनिया क्षेत्रमा पछिल्लो हप्तादेखि सुरु भएको काम सोमबार सकिएको हो ।
कुलमानको अर्को कदम : लामो समयदेखी राज्यलाइ बिधुत महसुल नतिर्ने २० उद्योगको विद्युतलाइन का**टियो